Ithegi: ukuthengisa izindlu nomhlaba | Martech Zone
Ithegi: ukuthengisa izindlu nomhlaba
Xa sakha i-Sauce yeAgent edibanisa iisayithi, ukudityaniswa kwe-IDX, ukhenketho, ukhenketho lweselfowuni, ukhenketho lwevidiyo, ukuthengisa nge-imeyile, ukuthumela imiyalezo ngeSMS kunye nokuprinta, besisazi ukuba ukuthengisa umxholo yeyona nto iphambili ekuqhubeni ukuthengisa ngakumbi kwiiarhente. Kwaye, akumangalisi ukuba, iiarhente zethu eziphakamisa iqonga ngokupheleleyo zibone eyona mpendulo inkulu kunye namaxabiso asondeleyo. Intengiso yokuqukethwe ayisiyo nje i-buzzword okanye enye indlela engangqiniswanga, yesicwangciso sokuthengisa: iyasebenza. Ngapha koko, ukuthengisa umxholo kubonisiwe ukuvelisa malunga
Ukuthengiswa kwezindlu kunye nokuDityaniswa kweMidiya yoLuntu
NgoMgqibelo, nge-20 kaFebruwari ngo-2010 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 UAdam Omncinci
UDoug ukhankanyiwe kwiposti yamva nje ukuba ukudityaniswa okuqinileyo kunye nokuzenzekelayo kuya kuba yinto ephambili kubathengisi be-imeyile. Sisebenza kunye neearhente zoThengiso lweZindlu kwaye yile nto kanye bayifunayo. Izinto ezimbalwa ekufuneka uyazi malunga nokuthengiswa kwezindlu: iiarhente zoThengiso lweearhente ayizobuchwephesha kwaye abanalo isebe le-IT lokufowuna xa bafuna uncedo. Bangabarhwebi, bamkela ngokukhawuleza ubuchwepheshe, kwaye bahlala belinganisa ifuthe. Bahlala bethengisa kakhulu-